Reykjanesbær • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
I Reykjanesbær dia tanàna any amin'ny Faritany atsimo (Suðurnes), Islandy. Izy io dia mandrafitra ny tanàna Keflavík, Njar villagevík ary ny vohitr'i Hafnir. Niorina ny taona 1994 ny tanàna rehefa nifidy ny hanangona azy ireo ho iray ny mponina amin'ireo tanàna telo ireo. I Reykjanesbær no tanàna fahadimy ao Islandy, misy mponina 18.920 (2019).
Sandam-bola Krôna Islandy